Fifidianana filoham-pirenena : Miisa 2 517 ireo mpitandro filaminana ahetsika -
AccueilRaharaham-pirenenaFifidianana filoham-pirenena : Miisa 2 517 ireo mpitandro filaminana ahetsika
Ho tapitra anio ny fiomanana mialoha ny fifidianana. Efa tafapetraka avokoa ny lamina rehetra hiatrehana ny androm- pifidianana amin’ny 7 novambra. Manodidina ny 2517 ny mpitandro filaminana hiantoka ny fiambenana ny tananan’Antananarivo tsy hisian’ny fikorontanana.
Araka izany nisy ny fepetra efa noraisin’ny tompon’andraikitra hitandroana ny filaminana ao anatiny sy eny ivelany mandritry izany. Anisan’izany ny fanaparitahana mpitandro filaminana manerana any amin’ny biraom-pifidianana sy fokontany mandritry io iray andro io. Misy ihany koa ny hanao fidinana manokana ireny toerana misy olona mitangorona hialana amin’ny fanakorontanana samihafa. Manoloana izany dia ho hentitra ny fitandroana ny fahalemana, saingy tsy hanana fahafahana hiditra ny biraom-pifidianana ny mpitandro filaminana. Na dia izany aza misy ny fepetra manankery hampiharina ao anatin’izany, izay navoakan’ny avy eo anivon’ny prefektiora, Ravelonarivo Angelot, omaly.
Nambarany tamin’izany fa hitandroana sy hiarovana ny tsiambaratelon’ny fifidianana avokoa no anton’ny nandraisana izany fepetra izany. Midika ihany koa izany ho famelana malalaka ny olona iray haneho ny safidiny ao amin’ny trano fisainana. Efa lamina voapetraka izany ary tokony hisy ny fifanomezana tatitra ataon’ny lehiben’ny fokontany amin’ny mpitandro filaminana mifamezivezy manoloana ny biraom-pifidianana iray.
Nohamafisiny tamin’izany fa io no fepetra tsy maintsy noraisina raha ny eto an-drenivohitra manokana. Etsy andaniny tsy hisy hipetra-potsiny fa hivezivezy hanao ny asany manerana ny toeram-pifidianana isaka ny faritra misy biraom-pifidianana ny mpitandro filaminana, izay efa maherin’ny 10 000. Ankoatra ireo, misy ny fiara sy môtô hampiasana mandritry izany, raha ny tatitra voaray.